lulu: မင်္ဂလာနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေရှင့့့် 
မင်္ဂလာနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေရှင့့့် 
at 11:10 AM Labels: အထွေထွေ
ချစ်သောမောင်နှမများအားလုံး မင်္ဂလာပါရှင်။ မနက်ဖြန်ဆိုရင် ကျွန်မ အင်ဒိုနီရှားရောက်နေတာ သုံးလ ပြည့်ပြီမို့ မြန်မာကို ပြန်ပါတော့မယ်နော်။ သင်္ကြန်အမီပြန်နိုင်တယ်လို့ပဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ တူးပို့တူးပို့ဒိုးသံကြားမှာ ရင်ခုန်မိနေပါတယ်။ ပြန်ရတော့မှာမို့ ဒီမှာခင်မင်ခဲ့ရတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ ကျွန်မကို စောင့်ရှောက်ထားတဲ့ အဖေနဲ့အမေတို့ကို ခွဲဖို့ အရမ်း စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသလို ကိုယ့်မြေ ကိုယ်ရေကို နှစ်ကူးအချိန်ခါသမယမှာ ပြန်ရမှာမို့လည်း ၀မ်းသာကြည်နူးမိပါတယ်။
ကျွန်မရဲ့ ဘလော့ဂ်မောင်နှမများကိုလည်း နှစ်သစ်ကူးမှာ အစစအရာရာ အဆင်ပြေပြီး ရွှင်လန်း ချမ်းမြေ့ ကြပါစေလို့ ကျွန်မတို့ ၀ိုင်းတော်သားများအားလုံးက ဆုမွန်ကောင်းချွေပါတယ်နော်။ သင်္ကြန်ပိတ်ရက်မှာ သင်္ကြန်အစားအစာတွေ လုပ်စားနိုင်ဖို့အတွက်လည်း မီးဖိုဆောင်လေးထဲကမှာ အရင်ကတည်းက တင်ပြီးသား လင့်ခ်လေးတွေကို မောင်နှမ အလွယ်တကူရှာဖွေလို့ရအောင် ဒီနေရာမှာ တစ်စုတစည်းတည်း ပြန်တင်ပေးခဲ့ပါမယ်နော်။
သင်္ကြန်ဆိုရင် မဖြစ်မနေ လုပ်စားကြတာက ရွှေရင်အေးပါပဲနော်။ သူ့အတွက် လင့်ခ် ၂ ခုရှိပါတယ်။
ပထမတစ်ခုက ကျွန်မရုံးက မောင်နှမတွေကို လုပ်ကျွေးခဲ့တဲ့ ရွှေရင်လေးလင့်ခ်လေး ဖြစ်ပါတယ်နော်။ http://lulucooking.blogspot.com/2008/04/blog-post_11.html
ဒုတိယတစ်ခုက ကန်တော်ကြီး မျှော်စင်ကျွန်းမှာ ကျင်းပတဲ့ ရွှေရင်အေးပြိုင်ပွဲမှာ ဆုရရှိခဲ့တဲ့ ရွှေရင်အေး လင့်ခ်လေး ဖြစ်ပါတယ်နော်။
မုန့်လုံးရေပေါ်အတွက် လင့်ခ်လေးကတော့ ဒီမှာပါနော်။
အုန်းနို့သာကူကျိုအတွက် လင့်ခ်လေးကတော့ ဒီမှာပါနော်။
မုန့်ပိန္နဲစေ့လုပ်စားချင်တဲ့ မောင်နှမတွေအတွက်ကတော့ ဒီလင့်ခ်လေးကို သွားလိုက်ပါနော်။
မွန်လို ဘရပ်ဘော့လို့ ခေါ်တဲ့ ငှက်ပျောပေါင်းလေး လုပ်စားမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီမှာပါနော်။
သာခွေယိုင်လုပ်စားမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလင့်ခ်လေးကို ကြည့်လိုက်ပါနော်။
သီးစုံကျောက်ကျောအတွက် လင့်ခ်လေးကတော့ ဒီမှာပါနော်။
ဒီလင့်ခ်လေးကတော့ အုန်းစိမ်းပင်ပွားကျောက်ကျောလုပ်နည်းလေးပါနော်။ ကန်တော်ကြီး မျှော်စင်ကျွန်းမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ကျောက်ကျောပြိုင်ပွဲမှာ တတိယဆု ရခဲ့တာပါနော်။
ဆိမ့်သက်အရသာနဲ့ ကျောက်ကျောလေးစားချင်ရင်တော့ ပူတင်းကော်ဖီကျောက်ကျောလေး လုပ်စားကြည့် ပါဦးနော်။
ချောကလက်ရနံ့အရသာကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ မောင်နှမတွေအတွက်ကတော့ ချောကလက်ကျောက်ကျော လေး လုပ်စားကြည့်ပါဦးနော်။
အအီလည်းပြေစေ၊ အအေးလုပ်သောက်ဖို့လဲအဆင်ပြေစေတာကတော့ ဆားငန်သီးကျောက်ကျောလေး ပါနော်။ ဒီလင့်ခ်ကို သွားကြည့်ပါဦးမောင်နှမတို့ရေ့့ 
စတော်ဘယ်ရီရနံ့သင်းနဲ့ စားချင်ရင်တော့ ဒီလင့်မှာ နို့စတော်ဘယ်ရီကျောက်ကျော လုပ်နည်း ရှိပါ တယ်နော်။
ဒါကလည်း အရသာတစ်မျိုးလေးနဲ့ စားကောင်းလှတဲ့ နို့ကီဝီကျောက်ကျောလေးပါနော်။ ကီဝီစေ့လေး တွေကို ကိုက်မိတဲ့အခါတိုင်း အရသာရော ရနံ့တစ်မျိုးလေးနဲ့မို့ လုပ်စားကြည့်ပါဦးနော်။
မောင်နှမတို့ရေ့့့  ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ သင်္ကြန်ပိတ်ရက်မှာ မိသားစုတွေ သူငယ်ချင်းတွေစုံလင်စွာနဲ့ တာသင်္ကြန်ချိန်ခါမှာ မြန်မာ့ရိုးရာမုန့်လေးကို ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ချက်ပြုတ်သုံးဆောင်နိုင်ကြပါစေနော်။
မကြာခင်မှာ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ရင်း ကျွန်မချစ်သောမောင်နှမများကို ခဏနှုတ်ဆက်ပါရ စေနော်။ မြန်မာပြန်ရောက်တဲ့အခါလည်း မောင်နှမများအတွက် တတ်နိုင်သလောက် ဟင်းအသစ်အသစ်များ ကို ကြိုးစားချက်ပြုတ်ပြီး ၀ိုင်းတော်သားများထံကတဆင့် ပို့စ်တင်ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ်နော်။ ချစ်သောမောင်နှမများ ခဏတာ့တာပါနော့့့့် 
ပျော်ရွှင်ဖွယ်အတိပြီးသော မင်္ဂလာနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေလို့လည်း ကျွန်မတို့ မေတ္တာရပ်ဝန်းမီးဖိုဆောင်မှ ၀ိုင်းတော်သားများအားလုံးက ဆုမွန်ချွေပါတယ်နော့့့် 
ကိုမျိုး (အညာမြေ) April 9, 2010 at 11:31 AM
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ..စိတ်ချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာ..သာယာကြည်နူးဖွယ်ရာ အဖြာဖြာဖြင့် အစစအရာရာ အဆင်ပြေချောမွေ့ အောင်မြင်သာယာပါစေကြောင်း နှစ်သစ်မှာ ဆုမွန်လောင်းလိုက်ပါတယ်ဗျာ.....
Shinlay April 9, 2010 at 11:54 AM
မလုရေ...နှစ်သစ်မှာ သင်္ကြန်ရေ နဲ့ အတူအေးမြရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ။
ဟင်းချက်နည်းတွေကို မအားတဲ့ကြားက တင်ပေးနေလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သြဂုတ်လမှာ ရန်ကုန်မှာ ပြန်ဆုံကြမယ်နော်....
rose of sharon April 9, 2010 at 12:26 PM
ကျေးဇူးညီမလေးလုလုငယ်ရေ... စေတနာတွကောင်းလိုက်တာ.... လိုက်ရှာစရာမလိုတော့ဘူး... အရမ်းအဆင်ပြေတယ်....
subuueain April 9, 2010 at 10:14 PM
မမလုရေ နှစ်သစ်မှာပျော်ရွှင်ပါစေနော်။ ဟင်းအသစ်လေးတွေမျှော်နေမယ်နော် :)
ထပ်ခိုး April 10, 2010 at 10:21 PM
Evy April 10, 2010 at 10:53 PM
မုန့်လုပ်တဲ့ Link တွေအများကြီးပါလား ။ကျေးဇူးနော် မမလု။ Happy new year ပါနော်။
လသာည April 11, 2010 at 5:29 PM
Happy Myanmar New Year နော် လုလုရေ..
မြန်မာပြည်မှာ အတာသင်္ကြန်ကို ပျော်ရွှင်စွာ ပါဝင်ဆင်နွဲနိုင်ပါစေ..။ အလှူဒါနတွေလည်း အများကြီးလုပ်နိုင်ပါစေနော်..
လင့်ခ်တွေအကုန်ကြည့်ပြီး စားချင်တာတွေကို စိတ်ကူးယဉ်သွားတယ် သိလား
happy new year lulu.
wanna try all of your recipes during thingyan.
ma myat lay pan
စူးနှယျလေး April 15, 2010 at 1:34 PM